मेस्सीलाई तीन महिनाको प्रतिबन्ध ! - Paschimnepal.com
एजेन्सी । अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सीलाई अन्तराष्ट्रिय फुटबलमा तीन महिनाको प्रतिबन्ध लागेको छ । कोपा अमेरिकी फुटबलमा भ्रष्टचारको आरोप लगाएका मेस्सीलाई अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट तीन महिनाको प्रतिबन्ध लगाईएको हो ।
दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले मेस्सीलाई तीन महिनाको प्रतिबन्धसंगै ५० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना समेत गरेको छ ।
मेस्सीले आफुमाथि गरिएको कारबाहीको बिषयमा ७ दिनभित्र अपिल गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिबन्धसंगै मेस्सीले अर्जेन्टिनाले चिली, मेक्सिको र जर्मनीविरुद्व सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा खेल्ने मैत्रीपूर्ण फुटबल गुमाउनेछन् ।
अर्जेन्टिनाले सन् २०२२ को विश्वकप छनोट सन् २०२० को मार्चबाट सुरु गर्नेछ ।
कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिना सेमिफाईनलमा आयोजक ब्राजिलसंग २–० ले हारेको थियो । सो क्रममा अर्जेन्टिनी फुटबल संघले मैदानको बिषयलाई लिएर गम्भिर आलोचना व्यक्त गरेका थिए ।
दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले मेस्सीले लगाएकाे आरोप निराधार रहेको र त्यसमा सम्मानको कमी देखिएकाे बताएको छ ।
तेस्रो स्थानका लागि भएको प्लेअफमा मेस्सी ३७ औ मिनेटमा रातो कार्ड खादै मैदान बाहिरिएका थिए । अन्तिममा उनले पदक लिन समेत अस्विकार गरेका थिए ।
‘हामी यो भ्रष्टचारको कुनै भाग हुन चाहदैनौ ।’ मेस्सीले भनेका थिए, ‘उनीहरुले प्रतियोगितामा हामीलाई सम्मानको कमी देखाएका छन् ।’
‘अफसोचको कुरा यही छ, भ्रष्टचार, रेफ्रीले फुटबलको आनन्द लिन अनुमती दिदैन । उनीहरुले यसलाई बर्बाद गरिदिएका छन् ।’ उनले भनेका थिए ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन १८, २०७६ 5:37:32 PM
Prevचल्यो त्रिशुली थ्री ‘ए’, ११ वर्षपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा ठूलो आयोजना
Nextके तपाई बेलुका ढिलो खाना खानुहुन्छ ? हो भने एकछिन यो पढ्नुहोस्